के कारण गयो सेयर बजारमा पहिरो ? लगानीकर्ता त्रसित - Arthatantra.com
के कारण गयो सेयर बजारमा पहिरो ? लगानीकर्ता त्रसित
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजको असर सेयर बजारमा देखिएको छ ।
बैंकहरुले असोज १ गतेदेखी लागू हुनेगरी ब्याजदर सार्वजनिक गरेसँगै बजारमा पनि असर देखिएको छ ।
बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरमा ब्याज निकै रहेको छ । जसले गर्दा लगानीकर्तालाई अस्थिर बनेको बजारमा भन्दा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेर ब्याज खाने माहोल सृजना देखाएको छ । जसको असर बिहीबारको कारोबारमा परेको जानकारहरुको भनाई छ । बजारमा आएको पहिरोले लगानीकर्तालाई समेत आगामी दिनमा कता जाने हो भनेर त्रसित समेत बनाएको छ ।
बजार मापन गर्ने सूचक ७६.६५ अंकले घटेर २८१२.३९ बिन्दुमा रोकिएको छ । बजारमा भारी गिरावट आएपनि कारोबार रकम भने केही सुधार देखिएको छ । २२९ कम्पनीको १ करोड ६४ लाख ६८ हजार ५०८ कित्ता सेयर ९ अर्ब ३ करोड ३९ लाख ६२३ रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।
कारोबारमा सबै समूहको उपसूचकमा भारी गिरावट आएको छ । कारोबारमा ४१.१४, विकास बैंक १९७.२२, वित्त कम्पनी १३९.४४, जलविद्युत कम्पनी १३७.७९, जीवन बीमा समूहको ४५२.५९, माइक्रोफाइनान्स १७१.७७, निर्जीबन बीमा समूहको उपसूचक ३८३.७० अंकले घटेको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ ३१ बिहीवार १५:१७ मा प्रकाशित
News Views: 327
अघिल्लाे गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग्दै सेयर लगानीकर्ताको आमरण अनसन सुरु
पछिल्लाे कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक,चन्द्रागिरी हिल्स लगायत यी हुन आज उच्च दरमा सेयर मूल्य घटेका कम्पनीहरु, कसले कति गुमाए ?